Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 12
Raha marina fa tsy misy afa-tsy shells, spooks sy entities izay tsy misy manasaka, araka ny fampianaran'ny teôsophika, amin'ny fisamborana, avy aiza avy ny fampahalalana sy ny fampianarana momba ny filôzôfika ary matetika ny teôsophical natiora, izay noeritreretin'ny medy ny sasany?
Ny fampianarana ny karazan'olona rehetra dia mitondra ny lanjany na ao anatiny. Ny fampianarana rehetra dia tokony hotsaraina amin'izay mendrika azy na inona na inona antony navoakany. Miankina amin'ny fahaizan'ny mahazo fampianarana izay azony atao ny mitsara ny fampianarana amin'ny vidiny marina. Ny fampianarana sasany dia mihatra amin'ny lafiny rehetra, fa ny hafa kosa tsy maintsy jerena ary noeritreretina ary noeritreretiny alohan'ny fahitana ny tena dikany. Ny ankamaroan'ny haingam-pandeha miroborobo sy ny fiantsonana amin'ny fotoana fahitana, ary ny mpihaino dia mandray ireo teny ireo. Indraindray dia mety handray na mamerina ny lahateny filozofia ny haino aman-jery iray, izay lazaina fa fehezin'ny fanaraha-maso sasany. Rehefa omena amin'ny alàlan'ny haino aman-jery ny fampianarana momba ny filozofia na ny teôsôlôjia dia azo lazaina fa avy amin'ny ego ambony kokoa, na avy amin'ny olon-kendry izay mbola miaina ao anaty vatana, na avy amin'ny olona nianatra ny hisaraka sy miaina miavaka. avy amin'ny vatana ara-batana, na avy amin'ny olona nandao ity fiainana ity, fa tsy nanasaraka ny tenany amin'ny faniriany amin'ny vatany izay nampifandray azy tamin'ny izao tontolo izao ary tsy niharan'ny fanjakan'ny alalàn'ny olon-tsotra. mandritra sy aorian'ny fahafatesana.
Fampianarana izay mendrika mandritra ny loharanom-pahefana rehetra, amin'ny alalàn'ny fahalalana na tsia. Saingy tsy tokony hasina na oviana na oviana ny fampianarana satria ny loharano iray izay raisina ho "fahefana."
Moa ve ny maty no miara-miasa na miara-miombon'antoka amin'ny faran'ny farany?
Inona no dikan'ny hoe "maty?" Maty ny vatana ary esory. Tsy miasa intsony izy io aorian'ny fahafatesana ary ny endriny dia miparitaka amin'ny rivotra manify. Raha amin'ny alàlan'ny "maty" no faniriana manokana, dia afaka milaza isika fa maharitra mandritra ny fotoana iray, ary ny faniriana manokana toa izany dia mitohy amin'ny ezaka ataon'izy ireo hahazoana ny zavatra na ny zavatra iankinan'izy ireo. Ny maty tsirairay avy dia tsy maintsy miasa ho an'ny fiafarany manokana, satria isaky ny miasa ho an'ny faniriana manokana dia tsy miraharaha ny fahazoana tanjona sasany ny hafa. Raha amin'ny lafiny iray, amin'ny alàlan'ny "maty" dia midika fa anjaran'ny tsirairay izay mitohy hatramin'ny fiainana mankany amin'ny fiainana, dia hiteny isika fa afaka miaina aorian'ny fahafatesana amin'ny tontolon'ny idealy naorin'izy ireo, sy ho an'ny fahafinaretany manokana. , na ny foto-keviny dia mety ho toy ny tafiditra ao amin'ny tanjon'izy ireo ny fiainan'ny hafa, ka raha izany no hiainan'ny olona mandositra na hametrahany ireo idealy novolavola nataony fony izy teto an-tany. Ity tany ity no toerana hanaovana ny asa. Ny maty dia mandefa am-piomanana amin'ny fiverenany eto amin'ity tontolo ity hiasa. Momba ny zavamaniry tsy mety maty izay miaina amin'ny vatana ara-batana eto amin'ity tontolo ity, ny sasany dia miasa eto amin'ity tontolo ity mba hahatratrarana ny tanjony tsirairay, raha ny hafa kosa miara-miasa mba hahatratrarana ny fiafarany. Ny kilasy voalohany dia miasa samirery ho an'ny fiafarany manokana. Ny kilasy hafa dia miasa tsirairay ary mitambatra ho an'ny mahasoa ny rehetra. Mihatra amin'ny kilasy roa ireo izay tsy nahatratra ny tsy fahafatesan'izy ireo, izany hoe ny tsy fahafatesana dia fahatsiarovan-tena tsy mitohy ary mitohy amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny alàlan'ny fanjakana sy ny fepetra rehetra. Ny olona izay tonga amin'ny tsy fahafatesana amin'ny fiainana ankehitriny dia mety miasa aorian'ny fahafatesan'ny vatana na ho an'ny zavatra manokana ananany na ho an'ny tsara rehetra. Ity fiainana ity dia toerana ho an'ny asa eto amin'izao tontolo izao ho an'ny olombelona tsotra. Amin'ny fanjakana aorian'ny fahafatesana dia tsy miasa izy, toy izany no fotoana fitsaharana.
Ahoana no fomba hihinanana ny maty, raha tsy izany? Inona no manohana ny fiainany?
Ilaina ny sakafo mba hihazonana ny fisian'ny vatana na inona na inona karazany. Ny baoty, zavamaniry, biby, lehilahy ary andriamanitra dia mitaky sakafo hanohizana ny fiainana. Ny sakafon'ny iray dia tsy saka-mihinana. Ny fanjakana tsirairay dia mampiasa ny sakafo any ambanin'ny tany ary ho toy ny sakafo ho an'ny fanjakana ambonin'izany ny fanjakana tsirairay. Tsy midika akory izany hoe ny sakafo matanjaka iray amin'ny fanjakana iray dia sakafon'ny hafa, fa ny fototry ireo vatana ireo dia ny sakafo izay raisina avy amin'ny fanjakana etsy ambany na atolotra ho an'ny fanjakana etsy ambony. Ny vatan'ny olona maty dia sakafo ho an'ny tany, ny zavamaniry, olitra ary biby. Ny anton'asa izay nampiasa ny sakafo dia manohy ny fisiany amin'ny alàlan'ny sakafo, fa ny sakafo sakaizin'olombelona toy izany dia tsy mitovy sakafo izay nampiasaina hanohizana ny fisian'ny vatany. Aorian'ny fahafatesana dia ny olona tena izy dia mandry amin'ny fialan-tsasatra sy firavoravoana, afa-tsy rehefa avy nihataka ny tenany tamin'ny faniriana mafy amin'ny fiainany ara-batana izy. Amin'ny fifandraisany amin'ny faniriana amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ny tontolo ara-batana dia omeny ireo filana ireo ny mitovitovy amin'ny maha-olombelona ary ireo faniriana ireo dia miombona amin'ny fisainana fotsiny, saingy amin'ny fahatsapana fa ny tavoahangy vera dia mihinana ny fofon'ny menaka manitra misy azy. Ireo mazàna no miseho taorian'ny fahafatesana. Manohy ny fisiany amin'ny sakafo izy ireo. Ny sakafony dia alaina amin'ny fomba maro, arakaraka ny toetoetran'ny fiana manokana. Ny fanohizana ny faniriana dia ny hamerimberina izany. Izany dia azo atao amin'ny alalan'ny fanandramana fotsiny ny faniriana manokana amin'ny alàlan'ny vatan'ny olona iray. Raha ity sakafo ity no holavin'ny olombelona velona, ​​ny fitrandrahana dia mandoro ny tenany ary lany. Ny endrika faniriana toy izany dia tsy mihinana sakafo ara-batana, satria tsy manana fitaovana ara-batana izy ireo hanary sakafo ara-batana. Fa ny faniriana sy ny sampana hafa, toy ny singa voajanahary, dia manohy ny fisiany amin'ny fofon-tsakafo. Ka raha izany no hevitr'izy ireo dia azo inoana fa miaina amin'ny fofon'ny sakafo, izay no sakafo masiaka indrindra azon'izy ireo ampiasaina. Noho io zava-misy io dia voasarika amina faritra sasany ny fofona azo avy amin'ny sakafo ny kilasy sasany misy singa sy entan'olombelona faniriana. Ny fofona manitra ny fofona kokoa noho ny mafonja ary ny fihetseham-po dia ny fironana mahasarika; Ny orin'asa talohan'ny olombelona, ​​ireo singa manintona natiora dia voasarika sy averina amin'ny fandoroana ditin-kazo manitra. Ny fandoroana ditin-kazo manitra dia manintona na mandroaka kilasy na orinasa toy izany. Midika izany fa ny "maty" dia azo lazaina hoe mihinana. Amin'ny lafiny hafa, ny fitsipiky ny fahatsiarovan-tena diso izay miaina ao amin'ny lanitra tsara indrindra na ny fitsaharany dia azo lazaina koa hoe mihinana mba hanohizany ny fisiany ao amin'io fanjakana io. Fa ny sakafony dia ny eritreritra tsara indrindra amin'ny fiainany; Araka ny isan'ny eritreretiny tsara dia natolony ny sakafo nohaniny taorian'ny nahafatesany. Io fahamarinana io dia tandindon'ny Ejiptiana ao amin'io ampitan'ny Bokin'ny Maty io izay aseho fa ny fanahy aorian'ny nandalovany ny Lapan'ny Fahamarinana Faharoa ary nolanjaina tamin'ny fifandanjana, nandia tao amin'ny sahan'i Aan Ru , izay ahitana varimbazaha nitombo ny dimy ary dimy amby fito hakiho ny haavony. Ny sisa dia afaka mankafy ny fotoanan'ny fitsaharana ihany, ny halavany izay voafaritry ny eritreriny tsara indrindra eto an-tany.
Manao akanjo ve ny maty?
Eny, fa araka ny firafitry ny vatana izay hitafy azy, ny eritreritra namorona azy sy ny toetra izay kasaina hambara. Ny fitafian'ny lehilahy na foko rehetra dia fanehoana ny toetran'ny tsirairay na ny olona. Ankoatra ny fampiasana akanjo ho fiarovana amin'ny toetr'andro, dia mampiseho toetra mampiavaka ny tsiro sy ny zavakanto izy ireo. Izany rehetra izany no vokatry ny fisainany. Mba hamaliana mivantana an’ilay fanontaniana anefa, dia holazainay fa miankina amin’ny tontolon’ny maty ny manao akanjo na tsia. Rehefa mifandray akaiky amin'ny eritreritra amin'izao tontolo izao ny vatana efa lasa dia hitazona ny fahazarana sy ny fomba amam-panao ao amin'ny tontolo sosialy izay nifindrany, ary raha toa ka hita ny vatana niala toy izany dia hiseho amin'ny akanjo izay mifanaraka indrindra amin'ny tiany. Hiseho amin'ny akanjo toy izany izy io satria na inona na inona eritreretiny dia ho izy, ary ny akanjo izay hotafiny ho azy ao an-tsainy dia izay ho nampiasainy fony izy teo amin'ny fiainana. Raha toa kosa anefa ka miova ny eritreritry ny maty ho amin'ny toe-javatra iray, dia hiseho amin'ny akanjo izay noeritreretiny izy, hifanaraka amin'ny toe-javatra. Noho ny fisainan'ny olombelona anefa dia natao hanafenana ny lesoka na hanatsara ny endriny ny akanjo, toy ny hiarovana na hiarovana azy amin'ny andro ratsy, fa misy faritra mandalo ao aorian'ny fahafatesana sy ahitana azy. araka ny tena maha izy azy fa tsy araka ny fitafiana no hisehoany. Ity sehatra ity dia eo amin'ny fahazavan'ny andriamaniny ao anatiny, izay mahita azy amin'ny maha-izy azy ary mitsara araka ny tokony ho izy. Amin'io sehatra io dia tsy mila akanjo na fiarovana, satria tsy iharan'ny eritreritry ny zavamananaina hafa izy. Noho izany dia azo lazaina fa manao akanjo ny “maty” raha mila izany izy ireo na mila akanjo, ary azo lazaina fa manao ny akanjo ilaina mba hiarovana, hanafenana na hiarovana ny vatany araka ny toe-javatra misy azy.
Mipetraka ao amin'ny trano ve ny maty?
Aorian'ny fahafatesana dia ny vatana ara-batana no mipetaka amin'ny vatany hazo, fa ny endriky ny vatana, ny vatana astral, dia tsy mijanona ao amin'io trano io. Miparitaka toy ny fanaon'ny vatana ny fasana; tena betsaka amin'ny lafiny ara-batana. Raha ny orinasa izay mitoetra ao amin'ny vatana, dia miaina amin'ny toe-javatra na tontolo iainana sahala amin'ny ankamaroan'ny toetrany. Raha ny eritreritr'izy ireo lehibe dia ny misintona azy amin'ny trano na toerana iray, dia ao an-tsaina na eo an-toerana izany. Mihatra amin'ny vatan'ny faniriana izany, fa ny olona izay miaina ao anatin'ny tontolo tsara indrindra aorian'ny fahafatesana - antsoina hoe lanitra - dia mety hitoetra ao amin'ny trano iray, manome azy trano satria mety handoko sary izay tiany. Ilay trano raha toa ka hisy hipetraka ao dia trano tsara, namboarinin'ny fisainany manokana fa tsy nataon'olombelona.
Matory ve ny maty?
Matory ny fahafatesana ary torimaso lava be na fohy izany satria ny masoivoho miasa eto amin'ity tontolo ity no mitaky azy. Ny torimaso dia fotoana fitsaharana, fiatoana vetivety amin'ny hetsika amin'ny fiaramanidina rehetra. Ny saina ambony na ego ambony dia tsy matory fa ny vatana na ny vatana izay iasanany dia mila fitsaharana. Ity fitsaharana ity dia antsoina hoe matory. Ka ny vatana ara-batana, ny taova rehetra, ny sela ary ny molekiola dia matory na manana fe-potoana na fohy na lava, izay mamela azy ireo hanitsy ny tenany amin'ny maha-magnetika sy elektrika azy ireo.